Hir-Shabeelle oo shaacisay inay barakaceen dadkii ugu badnaa | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Hir-Shabeelle oo shaacisay inay barakaceen dadkii ugu badnaa
Hir-Shabeelle oo shaacisay inay barakaceen dadkii ugu badnaa
Dowlad Goboleedka Hir-Shabeelle ayaa ku dhawaaqay in dadkii ugu badnaa ay todobaadyadii la soo dhaafay ka barakaceen deegaano katirsan Maamulkaas, kadib fatahaad uu sameeyey Wabiga Shabeelle.
Wasaarada Gargaarka iyo Maareeynta Masiibooyinka Hir-Shabeelle ayaa sheegtay in Hirshabeelle ay ku Barakaceen ilaa 450 kun oo Qaf,kuwaas oo ay saameeyeen fatahaadaha iyo Roobabkii ka da’ay deegaannada Maamulkaas.
Wasiirka Wasaarada Gargaarka iyo Maareeynta Masiibooyinka Hirshabelle Cabdi Mahad Qoorgaab ayaa sheegay in Roobkii deyrta ee ugu xooga badnaa uu ka da’ay degmooyinka Baladweyne, Jowhar Buulo-Burde iyo deegaano kale, kaas oo reebay saameyn weyn.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in Magaalada Baladweyne Xaafado katirsan uu ku fatahay Wabiga Shabeelle, isla markaana qaar kamid ah dadkii ku noolaa ay barakaceen.
In ka badan 450 kun ayuu sheegay inay ka barakaceen fatahaadaha iyo roobka ka da’ay deegaannada Hir-Shabeelle,isla markaana ay heystaan xaalado bani’aadanimo,waxaana uu ku baaqay in dadkaasi loo gurmado.